China Chicken iri na ose factory na-emepụta | Huikang
Production usoro otu
Ewepụ ọkpụkpụ apata ụkwụ 1, gbakwunye yabasị 1/4, ginger abụọ abụọ, ngaji abụọ nke mmanya esi nri, iberibe ọcha na-acha ọcha, gbanye awa ole na ole n'ime ite ahụ, ma jiri fọk wepụ ọtụtụ apata ụkwụ. anụ Obere oghere.
Mpekere 2.1 nke ntụ ntụ ojii, ngaji abụọ nke mmanya na-esi nri, 1 ngaji nke ọkụ soy ihendori, ngaji mmanya mmanya abụọ, ọkara okpokoro nke ose ojii oji, ngaji abụọ nke mmiri oyster, 1 ngaji shuga, obere nnu, belata ụfọdụ eyịm ọhụrụ maka ojiji ọzọ, na crisper intọ akwa nke ibe ọkụkọ na a oyi akwa nke raw yabasị na-etinye ha na friji n'abali. Tụgharịa ya ma ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla.
3. Ejiri iberibe otu butter ~ ọ kwesịrị ịdị n'ime 10G, ghaa yabasị, ma mgbe yabasị ahụ dị nro, tinye ofe esi n'ọkpụkpụ ọkụkọ, ngaji tomato ihendori, ngaji abụọ nke mmanya uhie, ngaji abụọ nke soy sauce, 1 ngaji Oji Black, ọkara ngaji nke ose oji, ohuru shuga na nnu, kpalie nke oma, tinye poteto a ghere eghe, nwuo nke oma, n'ikpeazụ ofe di oke ma i nwere ike gbanyụọ oku.
4. Sie ero ahụ ya na nkpuru oka, tinye ha na butter, tinye ha n'ime obere iko ejiri kabeeji na-acha odo odo.
5. Tinye poteto na karọt na ite ma ghee ha ruo mgbe akụkụ obe bụ ọlaedo, mgbe ahụ i nwere ike itinye ha na efere ahụ.
6. Tinye butter butter na 10G na-esi ísì ụtọ.
7. Nke mbụ, ghee anụ ọkụkọ n'otu akụkụ, tinye ngaji mmanya uhie, pịa steak anụ ọkụkọ na spatula, ma ghee ihe dị ka nkeji 2 maka ngụkọta nke minit 2.
8. Kwadebe ọka, akwa, wdg.
9. Debe efere nso.
10. Ọkụkọ pụọ n’ite, o nwere ike iri ya.
Mmepụta usoro abụọ
1. Debone iberibe apata ụkwụ, tie ha aka n’ihu nwa oge, wee tie ha ihe na azu;
2. Tinye mmanya na-esi nri, anụ esiri esi, ntụ ntụ na-esi ísì ụtọ ise, soy sauce, jikọta nke ọma ma hapụ ya ka ọ jiri abalị friji;
3. Wunye mmanụ n'ime pan ahụ, gbakwunye agbaji anụ ọkụkọ, ma ghee ya maka nkeji ise n'akụkụ abụọ;
4. Fri ruo mgbe anụ sie ya wee bee mpekere;
5. Kpagide ose oji oji.
Nke gara aga: Kung Pao Ọkụkọ
Osote: Ejiri anụ ezi eji aka chekwaa
Oyi kpọnwụrụ akpọnwụ na eyịm
Oyi kpọnwụrụ akpọnwụ ede na eyịm
Oyi Oyi Mkpụrụ Oyi Friji Na Eyịm
Oyi Oyi Oyi Na Na Na Na Na